2010-2012ဇူလိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » 2010-2012ဇူလိုင်
Posted by မောင် ပေ on Jul 3, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 32 comments
၂၀၁၂မှာ မာယာလူမျိုးတွေရဲ့ ပြက္ခဒိန်ကြောင့် ကမ္ဘာပျက်မယ် ဆိုပြီး ကောလဟာလ တွေဖြစ်ခဲ့ ၊ ရုပ်ရှင်ဇါတ်ကားတွေ ထွက်ခဲ့ပေမယ့် .. ယနေ့ ၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး ။ အေးဆေးပါဘဲ ။ အေးဆေးဆိုပေမယ့်လည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငလျင်ကြီးတွေ မုန်တိုင်းတွေ ရေကြီးတာတွေ မြေပျိုတာတွေ တော့ ဖြစ်တာပေါ့ဗျာ ။ ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ရေကြီးတာရယ် ၊ ငလျင်အသေးစားလေးတွေ လှုပ်တာတွေလည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒါခဏထားဗျာ…
အခုရေးမယ့်စာကတော့ မောင်ပေ့အကြောင်းပါဘဲ…။ ၂၀၀၈ကနေ ၂၀၁၂ အခုအချိန်အထိ ဖြစ်ခဲ့ပုံ ၊ ကြုံခဲ့ရပုံ ၊ ကြုံနေရပုံလေးတွေကို ရေးပြချင်လို့ ပါ ။ စာဖတ်သူအတွက် အကျိုးတစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မှာပါ ။ သို့ ပေသည့်..အပျင်းပြေလို့ ပြေငြားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေး ရှေ့ တန်းတင်ပြီး ရေးတင်လိုက်ပါတယ်ဗျာ ။ ဖတ်လို့ မကောင်း ၊ မှတ်သားစရာတစ်စုံတစ်ရာမှ မပါခဲ့တဲ့ စာတစ်ပုဒ်ဖြစ်မှာ ၅၀%ကျော်သေချာနေတာမို့ .. ဖတ်ပြီး စိတ်တိုင်းမကျခဲ့ရင် ၊ မောင်ပေ ဆိုတဲ့ကောင်ကိုသာ အားမနာတမ်း ဆဲလိုက်ပါ စာဖတ်သူရေ… ကျုပ် သည်းခံပါမယ် ။ အခုစာရေးတဲ့အချိန်ထိ ခံစားချက်များစွာနဲ့ လုံးဝနေလို့ ထိုင်လို့ မကောင်းဖြစ်ရတာမို့ ရင်ဖွင့်ပြလိုက်ပါတယ်။ အပိုင်း၂ပိုင်း သို့ မဟုတ် ၃ပိုင်းအဖြစ် တစ်ပုဒ်ကို word count 600 ကျော်နဲ့ ခွဲရေးတင်ပါမယ် ခင်ဗျား။
မောင်ပေတစ်ယောက် အိပ်လို့ မရတဲ့ည ၊ အိပ်ရေးပျက်တဲ့ည ၊ အိပ်မက်ဆိုးတွေနဲ့ ည ပေါင်းများစွာ နဲ့ ဂယောင်ခြောက်ခြားတွေဖြစ်နေပြီး… အတွေးထဲမှာ အမြဲတမ်းတွေးနေမိတဲ့အကြောင်းအရာ ဖြစ်ချင်မိတဲ့ ဆန္ဒတစ်ခုဘဲ ရှိနေခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ “ ၂၀၁၂ ၂လပိုင်း ၁ရက်နေ့ ” အချိန်ကထိ ဘဝမျိုးကို ပြန်လိုချင်နေမိတာပါဘဲ ။ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ ကံဆိုးမှုများဟာ လုပ်ကြံခံလိုက်ရသလိုမျိုး ခံစားရပေမယ့် ဘယ်သူ့ ကိုမှ အပြစ်တင်စရာအကြောင်းလဲ မရှိတော့ ၊ တစ်ယောက်ထဲ ကြိတ်မှိတ်မျိုသိပ်ခံစားခဲ့ရတာပါ။
မောင်ပေ ဆိုတဲ့ အသက်၂၇ နှစ်အရွယ် ဘာဘွဲ့ မှမရ တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ဟာ သူ့ မိဘတွေရဲ့ ဈေးဆိုင်လေးမှာ ကူလုပ်ပေးရင်း သူ့ ဘဝနေ့ ရက်တွေကို ရိုးရှင်းလှစွာဖြတ်သန်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့ ရဲ့ တစ်လဝင်ငွေကတော့ စရိတ်ငြိမ်း တစ်သိန်းကျပ်ခန့် ရှိပါတယ်။ သူဟာ ကံတိုက် ၊ ကံနဲ့ ကစားတယ်လို့ ဆိုတဲ့.. ဘောလုံးလောင်းကစားခြင်းကို ဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် ။ ၂၀၀၈ ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ သူဟာလောင်းကစားရင်း နိုင်လိုက်ရှုံးလိုက်နဲ့ ၊ ကမ္ဘာ့ဖလားအပြီးမှာ ၈သိန်းခန့် ရှုံးသွားခဲ့ပါတယ် ။ အဲဒီအချိန်မှာ သူ့ လက်ထဲမှာ ပေးစရာ ပိုက်ဆံဆိုလို့ ၂သိန်းကျပ်ခဲ့ဘဲ ရှိပါတယ် ။ ဒါနဲ့ သူဟာ သူ့ အမေ ဆီကနေ ၆သိန်းကျပ်သော ပိုက်ဆံကို ပြန်ပေးပါမယ်ဟု ကတိပြုကာ ၊ တောင်းပန် ၊ တောင်းယူခဲ့ကာ ရှင်းပေးခဲ့ပါတယ် ။
အဲဒါပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ၊ သူဟာ အကြွေး၆သိန်းကို ပြန်ဆပ်ဖို့ ၊ သူ့ အသုံးစရိတ်ရဖို့ ပိုက်ဆံကို ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုတာ အသည်းအသန်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ် ။ မောင်ပေ ရဲ့ မိဘဆိုင်လေးဟာ နေ့ စဉ် နံနက် ၇နာရီ ၄၅ ကနေ ညနေ ၅နာရီ အထိ ဖွင့်ရောင်းရပါတယ် ။ ညနေ၅နာရီ ဆိုင်သိမ်းပြီ ဆိုတာနဲ့ မောင်ပေတစ်ယောက် ရေချိုး ညစာစားပြီးရင် အင်တာနက်သုံးရင်း နက်ဂိမ်းကစားလို့ ရတဲ့ ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ အမြဲ ထိုင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ ထိုင်တာကြာတော့ အဲဒီဆိုင်က ဆိုင်ရှင် ၊ ဂိမ်းလာကစား အင်တာနက်လာသုံးကြတဲ့ ချာတိတ်တွေ ၊ သူ့ လိုအရွယ်တွေ နဲ့ ခင်မင်သွားကြပြီး ၊ အင်တာနက်အတူသုံးရုံမက ၊ နက်ဂိမ်းအတူကစားရုံမက ဟိုသွားဒီသွား.. ဘော်လုံးပွဲ အတူကြည့် ၊ ဘီယာအတူသောက် ၊ အရက်အတူသောက် ရန်ဖြစ်ရင်လဲအတူ အစရှိသဖြင့် ငယ်ပေါင်းတွေလို ပေါင်းသင်းဖြစ်သွားပါတယ် ။ အဲဒီလိုနေရင်းနဲ့ မောင်ပေ တစ်ယောက်ဟာ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများစွာတိုးခဲ့ပါတယ် ။ သူရဲ့ နဂို မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းများဟာလဲ သူ့ ထက် ၂နှစ်လောက် ငယ်တဲ့သူတွေချည်းပါဘဲ ။ သူပေါင်းတဲ့အထဲမှာ သူ့ ထက် အသက်ကြီးတဲ့လူဆိုလို့ လေး ငါးယောက်လောက်ဘဲ ရှိပါတယ် ။
မောင်ပေ တစ်ယောက် ၂၀၁၀ကမ္ဘာ့ဖလားမှာ ရှုံးခဲ့ရတဲ့ ရှုံးကြေး ၈သိန်းကို ဒိုင်ဆီမှာ သွားပေးရင်း ၊ အလုပ်လေး ဘာလေးမရှိဘူးလား ၊ ပိုက်ဆံရမယ့်အလုပ်လေးများဘာလေးများ ရှိရင် ကူညီပါ ဟု ပြောခဲ့သောအခါ ၊ ဒိုင် က မောင်ပေ့ ကို နည်းလမ်းတစ်ခု ပြောပြခဲ့ပါတယ် ။ ဘာလဲဆိုတော့.. မောင်ပေ့ ဘော်ဒါမိတ်ဆွေတွေထဲက ဘောလုံးလောင်းတဲ့လူတွေကို မောင်ပေ က ကော်မရှင်စား ဒိုင်လုပ်ပေးဖို့ ပါဘဲ ။ မောင်ပေက သူ့ မိတ်ဆွေတွေ လောင်းသမျှ ကို စာရင်းမှတ် လက်ခံယူပြီး ၊ ဒိုင်ဆီမှာ တစ်ဆင့်ပြန်တင်ပေးရမယ့်အလုပ်ပါ ။ ငွေရေးကြေးရေးအနေနဲ့ ဘယ်လောက်ရမလဲ ဆိုရင် ၊ တစ်သိန်းကို ၁ကျပ်ခွဲ ပြန်ပေးမယ်လို့ ဆိုပါတယ် ။ ဥပမာ မောင်ပေ့ ဘော်ဒါ ပေါက်ဖော်က ဘောလုံးအသင်းတစ်သင်းသင်း ကို တစ်သိန်းကျပ် မောင်ပေ့ဆီမှာ လာလောင်းရင် ၊ မောင်ပေ က အဲဒီတစ်သိန်း ကို ဒိုင်ဆီမှာ ပြန်တင်ပေးရပါတယ် ။ အဲဒီတစ်သိန်းကျပ်တင်တဲ့အတွက် တစ်ထောင့်ငါးရာကျပ်ရပါတယ် ။ ၁၀သိန်းကျပ်လောင်းရင် ၁၅၀၀၀ ကျပ်ပေါ့ ။ အဲဒါထက်ပိုရနိုင်တဲ့ အနေအထားလဲရှိပါတယ် ။ ဥပမာပြောရရင်.. “ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် ” နဲ့ “ အာဆင်နယ် ” အသင်းကန်တဲ့ပွဲမျိုးမှာ မောင်ပေ့ မိတ်ဆွေတွေထဲက တစ်ယောက်က မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းဘက်ကနေ ၁သိန်းကျပ် လောင်းပြီး ၊ နောက်တစ်ယောက်က အာဆင်နယ် အသင်းဘက်ကနေ ၁သိန်းကျပ် လောင်းတယ်ဆိုပါစို့ ၊ အဲဒီအခါမျိုးဆိုရင် ၊ သူတို့ လောင်းသမျှ ကို ဒိုင်ဆီတင်စရာမလိုတော့ဘဲ ၊ ကြားထဲကနေ အကောက်ထိုင်ယူလိုက်ရုံပါဘဲ ။ အဲဒီအခါကျ ငါးကျပ်ရပါတယ် ။ ၁သိန်းကို ၅၀၀၀ကျပ် ပါ ။ ရှုံးတဲ့အသင်းကို လောင်းမိသူဟာ ၁သိန်းကျပ်ရှုံးမှာဖြစ်ပြီး ၊ နိုင်မယ့်အသင်းကို လောင်းခဲ့တဲ့သူကတော့ ၉၅၀၀၀ ကျပ်ဘဲ အလျော်ရပါမယ် ။ ၅၀၀၀ ကျပ်ကတော့ ဒိုင်ရတဲ့အကောက်ပါ ။ တစ်ကယ်လို့ အဲဒီပွဲကို ဆန့် ကျင်ဘက် လောင်းတဲ့လူမရှိဘဲ ၊ တစ်သင်းထဲဘဲ လောင်းကြတယ်ဆိုရင်တော့ သူရို့ လောင်းသမျှ ကို ဒိုင်ဆီ တင်ပေးရတာပါ ။ အဲဒီအခါကြ ၁သိန်းကို ၁ကျပ်ခွဲ ရတာပေါ့ ။
အဲဒီလိုနဲ့ ၊ မိဘလုပ်ငန်း ဈေးဆိုင်လေးမှာ ဈေးကူရောင်းပေးရင် တစ်ဘက်က ဘော်လုံးပွဲကော်မရှင်စား လုပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၊ ၂၀၁၀ ၁၂လပိုင်းလောက်မှာဘဲ ၊ မောင်ပေ့အမေဆီကနေ အကြွေးယူထားတဲ့ ၆သိန်းကျပ် ကို ပြန်ဆပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အပြင် ၊ လက်ထဲမှာလဲ ၄ သိန်းခန့် စုမိခဲ့ပါတယ် ။
ဘော်လုံးပွဲဒိုင်ဆီမှာ ကော်မရှင်စားတစ်ယောက်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေရင်း ၊ အခက်အခဲအသေးလေးတွေ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသေးပေမယ့် ၊ ချက်ချင်းဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ် ။ မောင်ပေ နဲ့ လုပ်ခဲ့တဲ့ ဒိုင်ဟာ အသေးစားလက်ခွဲဒိုင်တစ်ယောက်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သူနဲ့ အလုပ်လုပ်ရင်း ၊ မောင်ပေ့အကြွေးကျေသွားတဲ့ အချိန်မှာ ပြဿနာကြီးတစ်ခု ထပ်ဖြစ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ် ။ ဘာလိုလဲ ဆိုတော့ ၊ စနေ တနင်္ဂနွေ ဘောလုံးပွဲများစွာ ရှိတဲ့အထဲမှာ ၊ ရှုံးမယ့်အသင်းတစ်သင်း ဘက် ကို မောင်ပေ က ၄၈၀၀၀ ကျပ် လှမ်းလောင်းရာမှာ ၊ ၄သိန်း၈သောင်း လောင်းပါတယ်ဆိုပြီး ဇယားရှုပ်ကြခြင်းပါ ။ မောင်ပေ့ဆီမှာ လောင်းခိုင်းတဲ့သူဟာ အဲဒီရှုံးမယ့်အသင်းကို ၄၈၀၀၀ ဘဲ လောင်းခိုင်းတာပါ ။ မောင်ပေ ဒိုင်ဆီမှာ ပြန်လောင်းတော့လဲ ၄၈၀၀၀ ပါဘဲ ။ ကိုယ်မှ ပိုက်ဆံမရှိလို့ အလုပ်လုပ်နေပါတယ်ဆိုမှ ၊ ဘယ်လိုလုပ် ၄သိန်းကျော် လောင်းနိုင်မှာလဲ ။ ဒိုင်က သူ့ ဖုန်းနဲ့ ရီကောဒင်းတစ်ခုကို ဖွင့်ပြပြီး ၊ မောင်ပေ မှားတာ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဇွတ်အတင်းပြောပါတယ် ။ တစ်ကယ်တမ်း သူ့ ဖုန်း ရီကောဒင်းထဲမှာတော့ အဲဒီ ၄သိန်း၈သောင်း လို့ ပြောထားတာမှန်ပေမယ့် ၊ စကားပြောသံက မောင်ပေ ပြောတဲ့အသံ မောင်ပေ့ စကားသံမှန်း အတိအကျပြောလို့ မရပါဘူး ။ မောင်ပေကိုယ်တိုင် ဇဝေဇဝါ နဲ့ အားနာတဲ့ စိတ်ကြောင့် ခံလိုက်ရပါတယ် ။ နောက်ပြီး ရီကောဒင်းဆိုတာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်လဲ လုပ်ကြံပြီး အသံသွင်းလို့ လဲ ရနိုင်ပါတယ်လို့ ပြောပေမယ့်လဲ ၊ နောက်ဆုံးမှာ မောင်ပေ တစ်ယောက်ဟာ..
“ ကောင်းပါပြီ ၊ ကျွန်တော်မှားတာပဲ ဆိုပါတော့ ၊ ဒီအတွက် အဲဒီပိုက်ဆံကို အခုလောလောဆယ်တော့ မရှိသေးလို့ မပေးနိုင်သေးဘူး ၊ မဟုတ်လဲ ကျွန်တော့် လူတွေ လောင်းသမျှ အစ်ကို့ ဆီမှာ တင်ပေးရင်း တစ်ပတ်..တစ်ပတ် ကို ကော်မရှင် ၁သိန်းလောက် ရနေတာဘဲ ၊ အဲဒီရတာကနေ တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖဲ့ဆပ်ပေးသွားပါမယ် ” ဆိုပြီး ညှိနှိုင်းခဲ့ကာ ၃ပတ်ခန့် ငွေစုပြီး ပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်မမှားဘဲ ၊ အညစ်ခံလိုက်ရတဲ့ပုံမျိုး ကိုတော့ လုံးဝသဘောမကျခဲ့တာမို့ ၊ သူ့ အကြွေးကျေတာနဲ့ သူနဲ့ လမ်းခွဲတော့မယ်လို့ ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခဲ့လိုက်ပါတယ် ။
( ဆက်လက်ရေးသားပါဦးမည် ၊ စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ သည်းခံဖတ်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်)
……. အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ် …….
စိတ်ဝင်စားပါတယ်ကိုပေရေ ။ မသိသေးတဲ့ အတွေ့ အကြုံတစ်ခုပါဘဲ .
ဒီလထဲvip လမ်းကြောင်းရှိလို့ နောက်လအတွက်ပါတခါထဲ
ဆရာ သော်တာဆွေက “ကြက်ဋီကာ” လိုမျိုးစာတွေရေးခဲ့တယ်…
ဆရာ ရန်အောင်က “ထောင်ဋီကာ” လို့ပြောရလောက်အောင် ထောင်စာတွေရေးတယ်…
တို့…ကိုပေက “ဘောဋီကာ” လိုမျိုးစာတွေရေးတယ်…
ဒါနဲ့  အိုလံပစ်လဲ ပြင်ဆင်ထားဦးနော်
အသက်တရာမနေရ အမှုတရာပွေရတဲ့ လောကကြီးမှာ ဒီလောက်လေးကတော့ အမြည်းလေးလို့ သဘောထားပြီး ရှေ့လျှောက် ကြုံလာသမျှလောကဓံကို ကြံ့ကြံ့ခံ ကျော်လွှားနိုင်ပါစေလို့သာ..
အခုလိုမျိုး ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ် ကိန်းဂဏန်းနဲ့တကွ ပြောပြသူမျိုး အင်မတန်ရှားပါတယ်…။
အဲဒီအတွက် ကိုပေကို ချီးကျူးပါတယ်..
ဘောလုံးလောင်းကြေးကို ဖုန်းနဲ့တင်ရာမှာ အခုလိုမျိုးအညစ်ခံရတာ တော်တော်များပါတယ်..။
ကျုပ်ရဲ့ အင်မတန်ရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ဆိုရင် လောင်းသူတွေက ညစ်တာပါ။
တော်တော်ခံလိုက်ရပြီးတဲ့နောက် အဲဒါကို စိတ်ကုန်ကုန်နဲ့ စွန့်လွှတ်လိုက်တဲ့အထိပဲ….။
ဒါမျိုးတွေက လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့နေရာမှာ သတိထားစရာပေ့ါ။
နှုတ်တစ်ရာ စာတစ်လုံးလို့ အဆိုရှိတယ် မဟုတ်လား။
ဖြစ်နိုင်ရင် စာနဲ့ပေနဲ့ လုပ်တာ အကောင်းဆုံးပဲ။
ရေရှည်လုပ်လာလို့ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်သိနေရင် ကိစ္စမရှိဘူး။
ကိုယ်တိုင်သာဆို အခုလို အချင်းများရင် လွယ်လွယ်နဲ့ အလျှော့မပေးတတ်လို့ ……
ကိုပေရေ အားပေးတယ်ဗျို… ကိုပေ့အကြောင်းလေ က တမူထူးခြားတဲ့ အခြေခံအကြောင်းလေးပဲ…ဘ၀ ကိုဘယ်လိုပဲဖြတ်သန်းကြမ်းတမ်းပေမယ့် ကြံကြံခံနိုင်တဲ့ စိတ်ဓာတ်ဟာ တကယ့်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အရာပါ ကိုပေရေ……….
လုံးဝမသိတဲ့ လုပ်ငန်းမို့စိတ်ဝင်တစားစောင့်ဖတ်နေပါတယ်ကိုပေရေ့။ Long time no see
သိသလိုလိုနဲ့ မသိတဲ့အကြောင်းပါ ကိုပေ…။ နယ်မှာ အဖွံ့ဖြိုးဆုံး စီးပွားရေးတစ်ခုလို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ စောင့်ဖတ်နေပါတယ်နော်..။ တစ်လက်စတည်း လောင်းတဲ့အကြောင်းလေးတွေ ပြောပြပါဦး။ အပေါ်ကတွေ၊ အောက်ကတွေနဲ့ ရှုပ်နေတာပဲ။ သူငယ်ချင်းတွေ ပြောပြလည်း သဘောမပေါက်သေးဘူး။
ဦးပေရေ ဘာရယ်မဟုတ်ပေမယ့် အရမ်းဖတ်လို့ကောင်းပါတယ်
“စားစရာမရှိ၊ လျှော်စရာရှိ” ဖြစ်သွားတဲ့ ကိုပေကို ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။
ဒီလောက ကဒီအတိုင်းပဲဗျ။ အမြီးကျက်အမြီးစား၊ ခေါင်းကျက်ခေါင်းစားပဲ ဆရာရေ… ပါဝင်ပတ်သက်မိရင်တော့ တော်တော်တော့ ဂရုစိုက်လူပ်ရှားမှရမယ်။
ဦးပေရေ …..အဖြစ်ချင်းတွေကတူလိုက်တာ။ ဒီမှာကတော့ ဖုန်းနဲ့sms ပို့ပြီးအလောင်းအစား လုပ်တော့ ဒိုင်ကသူကွဲတဲ့ အချိန်လည်းရောက်ရော ညစ်တော့တာပဲ။ ကျွန်တော်လည်း ဦးပေလို ကော်မရှင်ပါ။ သူ့ထိုက်နဲ့သူ့ကံ ပြန်ခံသွားရပါတယ်။ ကျွန်တော်ပို့တဲ့ sms ကို internet နဲ့ edit လုပ်တယ်ဆိုပြီး စာမတတ်တဲ့ ဒိုင်ကစွပ်စွဲသဗျ။ သူ့ကိုကျွန်တော် ကျေးဇူးတောင်တင်သေး။ ဟားဟား ကျွန်တော့်ကို အထင်ကြီးလို့လေ။ ဖုန်း center ကလူတွေ ၊ နည်းပညာကျွမ်းကျင်တဲ့ လူတွေနဲ့ ကျွန်တော်ပို့တဲ့ sms ကို ၅ ရက်တောင် စစ်တယ်။နောက်တော့ နည်းပညာကို လိမ်လို့မရတဲ့အဆုံး ရှက်ရမ်းရမ်းသွားပါလေရော။ ကျွန်တော်ကတော့ ဦးပေလို သူ့ကို ကြွေးပေးစရာမရှိလို့ နောက်ဘယ်တော့မှ ဒီလို လူမျိုးနဲ့မဆက်ဆံတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဦးပေရဲ့ ပို့စ်ကို ဆက်ရေးပါ။ အားပေးနေပါတယ်
နောက်အပိုင်းတွေဘယ်လိုဆက်လာမလဲမသိပဲ အစပိုင်းဖတ်ကတည်းက ရင်မောမိတယ်.. အဲဒီလောင်းကစားက ကံရောညဏ်ရောနဲ့ဆိုင်တယ်.. ကျမကတော့ ဘယ်လိုကံကြောင့်လည်းမသိဘူး..လောင်းကစားဆိုရင်အကျိုးပေးသား.. :-)
ဒိုင်က သူ့ပါဝါကိုပြသွားတာပေါ့နော် ငါဒီလိုလုပ်လိုက်လို့ရတယ်ဆိုတာပြလိုက်တာပေါ့။
ကိုထူးဆန်း ခင်ဗျာ… ဖတ်ရှုအားပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား…
ကိုမြတ်ကျော်သူ ခင်ဗျာ… ကျွန်တော်က အခုမှ မြေစမ်းခရမ်းပျိုးအဆင့်လောက်တောင် ရှိပါ့မလားခင်ဗျာ ။ ဖတ်ရှုအားပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ကိုဆာမိ ရေ စာအဆုံးထိ စောင့်ဖတ်မယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာရပါတယ် ခင်ဗျား ။ ကျေးကျေးပါနော
ကိုရွှေတိုက်စိုး ခင်ဗျာ ဒီတစ်ခါဆုံမှ ဘီယာအတူသောက်ရင်း ထပ်ပွားတာပေါ့ဗျား
သဲကြီး ( မသဲနုအေး ) ရေ စောင့်ဖတ်မယ်လို့ သိရလို့ ဝမ်းသာရပါတယ် ။ ကျေးဇူးပါခင်ဗျား
မပု ရေ အခုထပ်ရေးမယ့် ဇါတ်သိမ်းပိုင်းကို ဆက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါနော ။ ကျေးဇူးပါခင်ဗျား
ဦးဦးပါလေရာ ခင်ဗျား… ကျွန်တော်ထွက်ခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တဲ့လောကနဲ့ အင်ထရိုဝင်ပြီးမှ နောက်ပိုင်းဖြစ်ခဲ့ တာလေးတွေကို ဆက်ရေးပါမယ်ခင်ဗျား ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ
အန်တီမမ ရေ လေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ
ညီငယ် ဖရဲရေ .. စိတ်ချပါ ။ စာအဆုံးပိုင်းကို ဆက်တင်တော့ပါမယ် ။ ရှဲရှဲ
မွန်မွန် ရေ… စာအဆုံးကို ဆက်လက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါဗျ ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော
နိုရာလေးရေ… စာအဆုံးကို ဆက်လက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါနော ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျား
အညာတမာရေ စာအဆုံးကို ဆက်လက်ဖတ်ကြည့်ပေးပါနော ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မောင်ထူးရေ အားပေးမှုကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျား
ခရစ်စတယ်လိုင်း ရေ ၊ အကျိုးပေးကောင်းသူတစ်ဦးဆိုတာ သိရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာမိပါတယ် ခင်ဗျား
shwe kyi ရေ အားပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ
ကိုပေါက် ရေ.. ရေးပြီဆိုမှတော့ ဘာမှ မချန်တော့ပါဘူးနော… ကြာပြီနော ကြာပြီခင်ဗျ
ကျွန်တော် မောင်ပေ ရဲ့ ပို့ စ်ကို ဖတ်ရှုသွားသော စာဖတ်သူအားလုံးကို လေးစားကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား။
ဘော်ဘော်တို့ မောင်ပေမှာ အကြွေးတွေနဲ့ဟေ့
2012 ကမ္ဘာပျက်မယ့် ဇာတ်ထုတ်ကတော့ ဖေ့စဘွတ်ထဲက ကာတွန်းတစ်ခုမှာတွေ့ဘူးတယ်
အစပိုင်းတော့ အဲ့သည်စာတွေဖတ် ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ပြီး ကြောက်စာကြီးပေါ့
2012 လည်းလွန်ရော အဲ့ဒါတွေက ဟာသကိုဖြစ်ရော
နှစ်ဖက်လောင်းကြေးကို ငါးကျပ်စားရတာ မိုက်တယ်
အကြွေးနဲ့လောင်းပြီး ပိုက်ဆံလိုက်ရတာခက်တဲ့ ဇာတ်ထုပ်တွေရော မရှိဘူးလား
ဒီလောကထဲ ကျုပ်လိုသတ္တဝါချည်းဘဲ ရှိလို့ကတော့ ကမ္ဘာကျော်ဘောသမားတွေခများ
ဟေ့လူ ဘိုပု ရှောက်မဖွနဲ့ လေဗျာ…. ဟာဘဲဟာဘဲ
ဒါ မာမီပု တို့ လိုင်း မဟုတ်ဘူးလေ။
ဖက်ရှင်ရှိုးတို့၊ မကြီးစန်းရဲ့ပွဲ တို့ ဆိုရင်တော့ မလွတ်တမ်း အားပေးမယ် မဟုတ်လား။
ဖုန်းပြောတာကို ရီကောရင်းလုပ်ထားတယ် ဆိုတော့ လူတိုင်းကို လုပ်တာလား မေးရမယ် ကိုပေ့ ဖုန်းဆက်မှ့ ရီကောရင်းလုပ်တယ်ဆိုရင်လဲ ဖုန်းဆက်တိုင်းလုပ်လား ပြန်မေးရမယ် အခုပုံစံက လိမ်မလို့ လုပ်တဲ့ပုံစံကြီးပဲ …ကိန်းဂဏန်းတွေကို မတ်ဆေ့ ပို့လို့မရဘူးလား ဗျာ…. ..:(
ဖုန်းမှာ call recorderလေးထည့်ထားပါလား။
ကိုယ်ပြောတာ ရှင်းရှင်းလေးကြားရတယ်။ date, timeအတိအကျနဲ့။
အုပေ နေရာမှာ ကျော်သာရှိုရင်
အဲဒီဒိုင်ကို -ီးတာင်မလျော်ပေးဘူးကွာလို့ ပြောပလိုက်မယ်..
အာတကေ မစိပါဘူးရှိုမှ ကလိန်ဂကျစ် လာလုပ်နေတယ်..သောက်ခွက်ဖြတ်ရိုက်ပလိုက်ရမှာ..
မတရားတော့လာမလုပ်နဲ့ဘောင်းဘီ အလံထူပလိုက်မယ်..
ကိန်းဂဏန်းကို sms ပို့တဲ့ကျွန်တော် အင်တာနက်နဲ့ လုပ်ပါတယ်ဆိုပြီး ကွန်ပျူတာ အင်တာနက် အကြောင်း ဘာမှမသိတဲ့ ဒိုင်က ညစ်ပါတယ်
နောက်ပိုင်းမှာ အူးပေ၏ ကြွေတလှည့်၊ကြက်တခုန်တွေ လာပါတော့မည်။
အားလုံးဘဲ ကျွန်တော့် ပို့ စ်လေးကို ဖတ်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ထပ်တင်မယ့် စာအဆုံးပိုင်း ပိုစ့်လေးကိုလဲ အားပေးကြပါဦးခင်ဗျား
မောင်ပေရဲ့ ဘ၀နဲ့ရင်းရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ မှတ်သားရပါတယ်။
ဒီလောက်ဖြစ်ရင်လည်း အဲဒီလောကကြီးက ထွက်ပါလားကွယ်။